Ogaden News Agency (ONA) – Mooyaale oo Dagaal Culus Kudhexmaray Jabhada OLF iyo Ciidanka Gumaysiga Itoobiya.
Mooyaale oo Dagaal Culus Kudhexmaray Jabhada OLF iyo Ciidanka Gumaysiga Itoobiya.
Wararka aan kahelayno magaalada Mooyaale ayaa sheegaya in dagaal culus uu kudhexmaray ciidanka Gumaysiga Itoobiya iyo Jabhada Xoraynta Oromiya ee marka lasoo gaabiyo looyaqaano OLF. TV ga layidhaahdo Oromiya Media Network (OMN) ayaa shaaciyay in dagaal khasaare laxaad leh gaystay uu kadhacay Mooyaale.
Warbixintan oo laga sooxigtay wariye Kenyan ah oo kusugnaa xuduuda udhaxaysa Itoobiya iyo Kenya ayaa aad loogu naafeeyay ciidanka gumaysiga oo dhibaatooyin laxaad leh kuhaya bulshada rayadka ah ee Mooyaale iyo nawaaxigiisa kudhaqan. Jabhada OLF ayaa dagaalo culculas kuqaaday fadhiisimaha ciidanka gumaysiga Itoobiya uu kuleeyahay dhulka Oromiya.
Waxaa maalinba maalinta kadambaysa sii xoogaysanaya dagaalada ay Jabhadaha hubaysan ee Gumaysiga Itoobiya kasoo horjeeda ay kuhayaan. Dagaalada oogu badan ayaa waxay dhexmaraan ciidanka maxaysata Gumaysiga Itoobiya iyo jabhadaha kala ah Ginbot 7 (Gobolka Axmaarada), OLF (Gobolka Oromada), TPDM (Gobolka Tigreeyga), GPLM (Gobolka Gambeelaha), BPLM (Gobolka Benishangul), iyo ADFM (Gobolka Axmaarada).
Dhanka kale Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenya (CWXO) ayaa dagaalo aan lasoo koobi Karin oo jaagta ah kuhaya Ciidanka Gumaysiga Itoobiya. CWXO oo kaashanaya shacabka Somalida Ogadenya ayaa ciidanka gumaysiga ee saamo la luudka ah khasaare balaadhan gaadhsiiyay. Gumaysiga Itoobiya ayaa xasuuq joogta ah kuhaya bulshada rayadka ah ee Somalida Ogadenya taasoo keentay dagaaladan joogtada ah ee lagaga soo horjeedo kooxda TPLF/EPRDF.
Dagaaladan kasocda dhamaan gobolada Itoobiya ayaa daliil u ah xaalada kala yaaca ah ee maanta uu gumaysigu kujiro. Wixii warar ah een kahelo dagaalada Itoobiya kasocda yaan wararkaanaga dambe haduu ilaahay yiraahdo idiinku soo gudbin doonaa.